Bafukule ezempilo yabantu eMalukazi | Isolezwe
Bafukule ezempilo yabantu eMalukazi
Isolezwe / 14 January 2013, 2:52pm /
INHLANGANO Ilamic Medical Association ibambisene neArbarak bank baqhubeka nomkhankaso wokusiza imiphakathi ehlwempu ezindaweni zabansundu ngemitholampilo kubalwa eMalukazi abemba khona isoyi ISITHOMBE BONGANI MBATHA
UNKK Rahim Kader kwesokudla weIslamic Medical Association ngomunye wabasungula ukwakhiwa kwemitholampilo ukusiza abantu abamnyama njengaseMalukazi ubehleli nabanye babahlengikazi abakhiqizwe isikole sabo ISITHOMBE BONGANI MBATHA
INJABULO ibibhalwe ebusweni emphakathini waseMalukazi namaphethelo ngesikhathi kuphendulwa isoyi yokwakhiwa komtholampilo omusha oxhaswe yinhlangano i-Islamic Medical Association (IMA).
Lo mtholampilo obugugelwe yisakhiwo sawo esineminyaka eyevile kweyishumi usiza umphakathi waseMalukazi ontulayo njengoba ngaphambilini kwakudingeka ukuthi umphakathi uhambe ibanga elide uma ufuna usizo lwempilo.
Izolo bekungaphendulwa isoyi kuphela kodwa i-IMA nabanye abaxhasi okubalwa ne-Al Baraka Bank, bebezokwethula ngokusemthethweni uhlelo oluvele seluqalile lokuqeqeshwa kwamalungu omphakathi ngezifundo ezihlukene zokucija amakhono ukuze bathole umsebenzi.
USister Honey Allee, owengamele lolu hlelo lokuqeqeshwa komphakathi, uthe kumanje asengaphezu kuka-2000 amalungu omphakathi asenezifundo azithole ngaphansi kwalolu hlelo.
Phakathi kwezifundo ezenziwayo kubalwa uhlelo lwe-Home Based Care oluthatha isikhathi esingamasonto amane, bese abebefunda kulona bathole izitifiketi.
UNksz Ntokozo Thusi wakwa-CC eMlazi, ongomunye wabafundi asebehlomulile kulolu hlelo, uthe kwaba ukuzwa ukuthi kunohlelo lwalolu hlobo, wanikela khona.
“Ngangizitshela ukuthi ngizokhishwa inyumbazane njengoba ngihlala kude neMalukazi kodwa akubanga njalo. Kunalokho ngathola ngisho i-kit engikwazi ukusiza ngayo abagulayo ngasekhaya,” kusho uNksz Thusi.
Kulamasonto amane, umfundi ngamunye kudingeka ukuthi achithe izinsuku eziyisishiyagalombili ehambela imindeni egulelwayo endaweni ukuze bezonikezela ngosizo ngalokhu abasuke bekuncele ohlelweni.
USihlalo wekomiti lemitholampilo yakwa-IMA eThekwini, uMnuz Solly Suleman, uthe babonga abaphezi ezikhwameni ezaziwa nge-South African Muslim Charitable Trust ne-Al-Imdaad, ngokusiza umphakathi waseMalukazi ngokuwakhela lo mtholampilo omusha nokuxhasa uhlelo lokubacija amakhono.
UMnuz Abed Karrim we-Al-Imdaad Foundation, uthe kuningi abafisa ukukwenzela imiphakathi entulayo kodwa kwesinye isikhathi akwenzeki.
“Lokhu okuncane esikwazi ukukwenza kukhombisa ngokusobala ukuthi umphakathi wama-Muslim uzimisele kangakanani ukusiza labo abaswele,” kusho uKarrim.